Tu Tu Tha: ထက်ထက်မိုးဦး မှန်တယ်
Friday, May 28, 2010 | Labels: ဖြတ်သန်းမှုစာစု |
This entry was posted on Friday, May 28, 2010 and is filed under ဖြတ်သန်းမှုစာစု . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
ကျေးဇူး။ ဒီအဖြစ်အပျက်အတွက် အမရေးမယ့်စာကို မျှော်နေတာ။
လူအချင်းချင်း ပါးရိုက်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ .. ဟားဟား အမရယ် :D